Ra’iisal wasaaraha Ethiopia oo dhex dhexaadinaya Soomaaliya iyo Imaaraatka. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jun 22, 2018
Hornafrik-Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo Ayaa Hornafrik u Sheegay in R/Wasaaraha itoobiya Abiy Axmed uu Wado dadaalo ku aadan sidii loo xalin lahaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Dowladaha Soomaaliya Iyo Imaaraadka Carabta oo mudooyinkii ugu dambeeyay mugdi ku jiray.
Xiriirka imaaraatka carabta iyo soomaaliya ayaa waxaa uu u xumaaday kadib markii lacag boorso ku jirtay oo uu imaaraarka leeyahay lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa intaa wixii ka dambeeyay ay joojiyeen mashaariicda ay ka fulin jireen gudaha soomaaliya hayeesheena wax waliba oo qalab ah ee soomaaliya ka yaalay ay ku rarteen markab ku soo xertay dekeda Weyn ee Magaalada Muqdisho,hayeeshee Dowlada Itoobiya ayaa qorsheynaysa in ay dib u soo celiso xiriirkii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Wararka ayaa ayaa Sheegaya in Ra`iisul Wasaaraha Xukumadda Fedraalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre lagu wado in maalmaha soo socda booqasho ku gaaro dalka isu taga Imaaraatka carabta halkaasi oo la sheegay inuu kulan kula qaato madaxda ugu sareysa ee wadankaasi.
Ra`iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la sheegayaa in safar R/W Kheyre uu ku tagayo dalka Imaaraadka iyo kulanka madaxda wadankaas uu la yeelanayo uu isagu diyaariyay, waxaana sidoo kale Ra`iisul Wasaare Abiy Ahmed uu wadaa dadaalada la isugu soo dhaweynayo Dowladaha Imaaraadka carabta iyo Soomaaliya.
Khilaafka dalalka Khaliijka soo kala dhex galay ee Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhan ah iyo Qatar ayaa Soomaaliya ku yeeshay saameyn aad u weyn, iyadoo dowladda Soomaaliya ka qaadatay mowqif dhex dhexaad ah, hase ahaatee Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ku cadaadinayay Xukuumadda soomaliya inay xiriirka u jarto Qatar oo loo arko inay xiriir dhow la leedahay Madaxtooyada Soomaaliya.
Jubaland oo xukun dil ah ku fulisay sedax Askari oo horay dil u geystay oo uu ka mid ahaa Askari xaaskiisa dilay.